बी.पी. भन्नुहुन्थ्याेः जनताले चाँहदैनन् भने राजाले सरक्क गद्दि छोड्नु पर्छ - हिमाल दैनिक
बी.पी. भन्नुहुन्थ्याेः जनताले चाँहदैनन् भने राजाले सरक्क गद्दि छोड्नु पर्छ
उदार भनिएका राजा विरेन्द्रले पनि बी.पी.को निधनमा बाध्यताबस शोक वक्तव्य जारी गरेका थिए
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार १९:३३
बी.पी.को जीवन संघर्षपूर्ण र विकट थियो। त्यो संघर्षपूण जीवनकाक्रममा उहाँले अनेकौँ पटक अनेकौँ किसिमका रणनीति र कार्यनीति अंगिकार गर्नु भएको थियो।
उहाँले अपनाएको कार्यनीति र रणनीतिमा अन्तरविरोध देखिन्छ। त्यसमा अनेकौँ ठाउँमा आजको मितिमा हेर्दा कमिकमजोरी पनि देखिन्छन् र नभएको पनि होइन। त्यी कमीकमजारीको म मात्रै भुक्तभोगी छैन, त्यसमा मेरा मित्र पौडेलजी पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, शेरबहादुर पनि भुक्त भोगी हुनुहुन्छ। तर, कदाचित उहाँहरुलाई मलाई जस्तो भन्न सजिलो छैन। किन भने उहाँलाई जिम्मेवारीबोध बन्नु पर्छ र मान्छेले के भन्लान भन्ने सोच्नु पर्छ।
बी.पी.को राजनीतिक जीवनमा राजनीतिक कमजोरी छैन भनि भन्नु हुँदैन। रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजीलाई मैले १०÷१५ दिनको फरकमा चिनेको हुँला। तर, साँचो राजनीतिक यात्रा रामचन्द्रजीसँगै गर्नु पर्यो। गण्डकी छात्र संघबाट। जेल भने गोपालमानजीसँग बसेको छु। शेरबहादुर त चार दिन बस्नु भयो र हिँडिहाल्नु भयो।
त्यतिबेला हामीले प्रजातान्त्रिक समाजावादी युवा दल वनारसमा गठन गरेका थियौँ। अर्जुननरसिंह केसी पनि केन्द्रीय समितिमा हुनु हुन्थ्यो। शैलजा आचार्य सभापति र रामचन्द्र पौडेल त्यसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संस्थापक म पनि थिएँ।
बी.पी. कोइराला रिहा हुनु अघि उहाँको रिहाइका लागि त्यो संस्थालाई भंग गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउँदा रामचन्द्र पौडेल र मैले संयुक्त रुपमा न्यूरोडमा घटराज बोहोराको घरमा साफ इन्कार गर्यौँ। त्यसको केहि समयपछि रामचन्द्रजी भद्रगोल जेलमा र म नख्खु जेलमा परेँ, त्यसको अलग कहाँनी छ। हाम्रो कहानीसँग बी.पी.को रिहाइको कहानी संलग्न छैन। बी.पी. केहि दिनपछि रिहा हुनु भयो। उहाँलाई रिहा गर्ने क्रममा सुवर्ण शम्शेरले आफ्नो त्यतिन्जेलको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर राजासँग सहयोगको वार्ता चलाउनु भएको थियो।
त्यसमा सूर्यप्रसादजीको पनि भूमिका थियो। तर त्यतिन्जेल सूर्यप्रसाद र सुवर्णसँग सहमत नभएर अहिंसाको बाटोमात्रै नेपालको राजनीतिमा एकमात्र बाटो हुन्छ भनर महेन्द्रनारायण निधि, बोधप्रसाद उपाध्याय जस्ता कांग्रेसका नेताहरु सूर्यप्रसादले जस्तो राजालाई फकाउने पनि होइन, सुवर्णले जस्तो बोर्डरपारी गएर वम पड्काएर तर्साउने पनि होइन, जनताकै समर्थनमा परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्थ्यो। साँचो के थियो भने, बी.पी. कोइराला छुटेपछि आफूसँगका सबै साथीलाई विशेष गरी सुर्वण शम्शेर, सूर्यप्रसाद, महेन्द्रनारायण निधि, जेलमा हुनु भएका किसुनजी लगायत अन्य साथीलाई छलफल गरी आगामी पार्टीको कार्यक्रम र रणनीति तय गर्नु भयो।
यहाँ भन्न के खोजेका हो भने, एकदमै छिटै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छु भन्ने व्यक्ति अक्सर एक्लै रहन्छ। बी.पी.ले जीवनका अनेकौँ चरणमा जबजब एक्लै निर्णय गर्ने कोशिश गर्नु भयो उहाँले सफलता पाउनु भएन। जबजब मिलेर निर्णय गर्नु भयो सुवर्ण शम्शेर, किसुनजी, महेन्द्रनारायणजीसँग सल्लाह गरेर गर्नु भयो त्यहाँ सफल हुनु पनि भयो। कसैका कमजोेरी कोट्याउँदै जाने हो भने त्यसको अन्त्य हुँदैन। एउटा मानिस आफ्नो जीवनमा जब सारा कुरा गर्छ र उसले भनेका सम्पूर्ण कुरा चरितार्थ हुन्छन्, उसका योगदान समाजले छर्लंग देख्छ अनिमात्र मान्छेको मूल्याकन गर्न सकिन्छ। बी.पी.ले नेपाली समाजलाई दिनु भएका कुरा छर्लंग छ।
आजको प्रजातन्त्र सात सालको क्रान्तिको जगमा खडा भएको प्रजातन्त्र हो। १५ सालको चुनावको जगमा खडा भएको यो लोकतन्त्र हो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले दिएको उपलब्धीमाथि टेकेरनै गणतन्त्र आएको हो। यसका प्रत्येक चरणमा बी.पी.को योगदान रहेको छ। त्यसैले आज बी.पी.ले यो कुरा चाहनु भएको थियो, त्यो कुरा चाहनु भएको थिएन भन्नु उहाँको अबमूल्यन गर्नु हो।
समय कसैका लागि पनि रोकिदैन। समयको वेग मृत्यु पर्यन्त रहिरहन्छ। त्यो कुरा जागरुक एक नेता वा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले समयमा बुझेर हिँड्न सक्नु पर्छ। बी.पी.ले धेरै कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो तर, उहाँले सबैभन्दा बढि खोजेको कुरा के थियो? तपाईहरुले याद राख्नुहोस्ः सात सालको क्रान्तिमा बी.पी. कोइरालाको प्रयासले विभिन्न शक्तिलाई सम्झाएर, बुझाएर, फकाएर राजा त्रिभुवनको मुखबाट भनाइएको थियो ‘संविधान सभाको चुनाव गर्नेछु।’ तर, हुन सकेन। कसैले भन्न सक्ला कि त्यो सात सालको कुरा मात्र थियो, त्यो होेइन। बी.पी. कोइरालाका कृतिहरुमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक कृति ‘राजतन्त्र’ शीर्षकमा उहाँले लेखेको झण्डै ५० पृष्ठ लामो पुस्तक पढ्नुहोस्। त्यो बजारमा पाइन्छ। हाम्रो पार्टीकै लाइब्रेरीमा पनि होला।
बी.पी.ले त्यो पुस्तकको अन्तिममा किटेरै लेख्नु भएको छ। राजाले संविधान सभाको माध्यमबाट प्राप्त भएको संविधानको दायरामा बस्नु पर्नेछ। त्यसमा सगँसँगै लेखिएको छ, संविधान सभाले तत्कालिन अवस्थामा राजा राख्न चाहेन भने राजाले सरक्क संविधान सभाको आदेश शिरोधार्य गर्नु पर्दछ। त्यसैले आज बी.पी.ले राजाको घाटीमा मेरो घाँटी जोडिएको छ भनि कोहि साथीहरुले अथवा (कमल थापा लगायत) थापा प्रवृत्तिले भन्न चाहन्छन् भने म बी.पी.को आफ्नै गम्भिर रचना राजतन्त्र पढ्न उहाँहरुलाई आग्रह गर्दछु।
बी.पी. कोइरालालार्इ कुनै अन्धाको हात्ती जस्तो नबनाउँ
बुँदागत रुपमा उहाँले राजतन्त्रको विषयमा लेख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि कुनै धरमर छ भने कांग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण विभागका प्रमुखलाई यहि मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्ता पुस्तकहरुकोबारेमा नेता कार्यकतालाई पढ्ने पढाउने व्यवस्था मिलाउनु होस्।
यो त भयो पछिको कुरा, पहिलेको कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विवाद संविधान सभालाई लिएर भएको थियो। २००७ सालमा राजा त्रिभुवनको शाही घोषणापछि चारवर्षपछिमात्र राजा महेन्द्रले वितण्डा गरे। टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संविधान सभाको चुनाव कसरी गराउने? एउटा देशमा सार्वभौमसत्ता कसरी दुई ठाउँमा रहन्छ? राजा सार्वभौम कि संविधान सभा सार्वभौम? पहिलो कुरा, बी.पी. त्यस विषयलाई लिएर अदालत जानु भयो। त्यसबीचमा तत्कालिन नेपाल पुकारमा (पार्टीको मुखपत्र) तत्कालिन कल्पनामा जुन पार्टीका समर्थन थियो। बी.पी.का केहि नभएपनि १० वटा लेख छन् जहाँ उहाँले बारम्बार यो कुरा भन्नु भएको छ कि संविधान सभा छोड्न सक्दै सकिदैन। संविधान सभाले राजालाई तिमी राजा रहन पाउँदैनौँ भन्छ भने राजाले पनि जनताको भावनालाई कदर गर्दै म विश्वको महान प्रजातन्त्रवादी हुँ भनि सरक्क गद्दि छोड्नु पर्दछ।
८ सालदेखि १५ सालको अवधिमा बी.पी.ले संकलित लेख रचना मध्ये वनारसमा अन्तिम लेखेको राजतन्त्र भन्ने शिर्षकमा पुस्तक नै लेख्नु भएको छ। त्यस पुस्तकको पुछारमा बुदागत रुपमा अहिलेको हाम्रो माग के हो भनि स्पष्ट लेख्नु भएको छ। जहाँ संविधान सभाले दायरा तोकेर राजालाई राखोस्। यदि राजालाई त्यो मन्जुर छैन भने राजाले हट्नु पर्छ।
बी.पी.ले पछि कुन परिस्थितिमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सार्नु भयो र घाँटीमा घाँटी जोडिएको भन्नु भयो, कुन भाषा र शैलीमा भन्नु भयो र कुन परिप्रेक्षमा भन्नु भयो त्यो परिप्रेक्षको पनि अध्ययन गर्न र बुझ्न सकिन्छ। बी.पी.को व्यक्तित्व विशाल भएकोले त्यसका अनेकन आयामलाई खोज्न जरुरी छ। तर, राष्ट्रिय मेलमिलापको आब्हान र त्यसको उद्देश्यलाई सर्वाधिक उदार भनिएका शाह वंशका सर्वाधिक प्रिय त्रिभुवनको अवतार र पुर्नजन्म भनिएका राजा विरेन्द्रले कसरी लत्याउनु भयो भन्ने पनि हामीमा सम्झना छ। ठूलो बाध्यतामा परेर राजा विरेन्द्रले बी.पी. कोइरालाको देहावसानमा शोक सन्देश दिए। त्यो शोक सन्देशमा उहाँले भन्नु भयोः हुनत् जुनसुकै नेपालीको निधनमा पनि हामी दुःखी हुन स्वभाविक हो। सबैैभन्दा उदार राजाले बी.पी.लाई जुनसुकै नेपालीको दर्जामा राखे।
त्यसैले बी.पी.को नाउँ भँजाएर बी.पी.लाई दक्षिणपन्थी शक्तिसँग जोड्ने काम गर्नु हुँदैन।
राजा र राजतन्त्रका बारेमा अनेकन लेखहरु बी.पी.का छन्। हरेकचोटी उहाँले भन्नु भएको छ राजा भनेको व्यक्ति होइन। व्यक्तिगत रुपमा विरेन्द्र असल थिए होला। तर राजा भनेको संस्था हो। जोे आजको दिनमा अब सम्भव छैन। युगको एउटा धर्म हुन्छ। आज अब जनताकै शासन चल्छ। जसरी चलेपनि जुन पद्धतिमा चलेपनि। अमेरिकन राष्ट्रपतिय प्रणालीमा चलेपनि, वेलायतको प्रणालीमा चलेपनि अथवा जापानको प्रणालीमा चलेपनि। अब बी.पी. भएको भए त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो। बी.पी. त क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो। बी.पी. जस्तै राष्ट्रवादी म पनि हुँ भनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु होला। अथवा प्रधानमन्त्रीका टेवाले पनि भन्नु होला।
हामीलाई थाहा छ कि बी.पी.ले कुनै दिन कम्युनिष्टहरुसँग मोर्चा बनाएर काम गर्न चाहनु भएको थिएन। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा ठाउँ ठाउँमा कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। तर, बी.पी. त्यतिबेला राजालाई सम्झाएर हुन्छ कि बुझाएर, फकाएर हुन्छ तत्कालका लागि सरकार वा आम चुनाव नपाएपनि कम्तिमा नागरिक अधिकार बहाली गर्ने कार्यनीतिमा हुनु हुन्थ्यो। कार्यनीति र रणनीति राजनीतिका दुई शब्द हुन। जुन नीति तत्कालका लागि लिइन्छ त्यसलाई कार्यनीति र जुन नीति लामो समयका लागि अपनाइन्छ त्यसलाई रणनीति भनिन्छ। यद्धको मैदानमा खासगरी तत्काल मोर्चा फेर्ने, कोसँग लड्ने र कोसँग नलड्ने भन्ने कुरामा त्यतिबेला पनि व्याख्या भएको हो। बी.पी. त्यतिबेला कम्युनिष्टहरुलाई आफूभन्दा अलग पंक्तिमा राखेको साच्चो हो। एउटा कुरा नविसौँ त्यतिबेलाको विश्व दुई ध्रुव सोभियत युनियन र अमेरिकामा बाँडिएको थियो। यहाँ यो पनि नबिर्सौँ अन्तराष्ट्रिय राजनीतिले त्यतिबेला नेपालमाथि तिखो नजर राखेको थियो। नेपालमा लोकतन्त्र बहाल गर्ने कि, सोभियत युनियनबाट संरक्षीत चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, पोल्याण्ड, युगोस्लाभिया, रोमानिया, बल्गेरिया आदि देशहरु जहाँ कहि पनि नागरिक अधिकार थिएन त्यस्तैे बनाउँने? बी.पी.लाई नेपालमा नागरिक अधिकार चाहिएको थियो। बी.पी.लाई कम्युनिष्टहरुसँग संसय थियो। त्यसैले बी.पी.ले पुष्पलाललाई बारम्बार भन्नु भएको थियो कि ल तिमी मेरो राजनीतिक कार्यक्रम स्वीकार गर म तिम्रो आर्थिक कार्यक्रम स्वीकार गर्छु। यो धेरै कांग्रेसका नेताहरुलाई पनि थाहा छ।
शितयुद्धका समयमा पनि वनारसमा पुष्पलालसँग बसेर कुरा गर्दा तिमी मेरो राजनीतिक कार्यक्रम स्वीकार गर भनेका थिए। राजनीतिक कार्यक्रम भनेको के हो? नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, आवधिक चुनाव, अदालतको स्वतन्त्रता इत्यादि। बी.पी.लाई शंका थियो कि कम्युनिष्टहरु राजासँग हातेमालो गरेर जनमत संग्रहमा समेत हराउन सक्दछन्। त्यतिबेलाको कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास थाहा भएको होला कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ठूलो विवाद चलेको थियो। तत्कालिन मालेको इतिहासमा राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टी स्वतन्त्रताको विवादमा सिपी मैनाली फ्याकिए। अर्थात बी.पी.को आशंका निराधार थिएन। जनमत संग्रहको पक्षमा कम्युनिष्टहरु खासगरी माले आएको थिएन। तत्कालिन मालेले बहुदल पक्षलाई साथ दिएन।
आज के छ? आज सोभियत युनियन धरासायी भएको छ। आजका कम्युनिष्ट कहिपनि कम्युनिष्ट छैनन्। आजका कम्युनिष्टहरुले सबै ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था अंगिकार गरिसकेका छन्। उनीहरुको अधिनायकवादी मानसिकता त गएको छैन तर, आज भन्दा पचास वर्षअघि हामीले जुन दृष्टिाकोण राख्दथ्यौँ त्यो दृष्टिकोण आज राखिरहनु आवश्यक छैन।
हाम्रा पिता पुर्खाका पालामा जाति प्रथा थियो। कहिँ छोइयो भने छिटो हालेर खाने प्रथा थियो। त्यो अवस्था आज छैन। अहिले हामीले पटक पटक कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर सरकार बनाएका छौँ। हामीले नै कम्युनिष्टहरुलाई एकाकार बनाएका हौँ। अथवा कम्युनिष्टहरुसँग बसेर आन्दोलन गरेका आधारमा त्यसलाई ठिक र बेठिक भन्नु उचित छ। कसैले ठिक र कसैले बेठिक भन्न पनि सक्छ। तर, त्यो बी.पी.को नाम लिएर वा सुवर्ण शम्शेरको नाम लिएर अथवा गणेशमानसिंहको नाम लिएर भन्नु ठिक हुँदैन।
(बी.पी. कोइरालाको १०५औ जयन्तीको अवसरमा नेपाली कांग्रस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका विचार विश्लेषक एवं नेता प्रदिप गिरिद्धारा व्यक्त विचारको अंश)
‘बीपी आश्रम’ कांग्रेस पुनर्यौवनको स्रोत किन हुँदैन? प्रदिप गिरिको उत्तेजक अडियोसहितको आलेखभोलि बिहान ठिक ७ बजे सुन्न नभुल्नु होला !!
Posted by Himal Dainik on Sunday, November 4, 2018
Prevपछिल्लोसंविधान बाहिर रहेर काम गर्नु गलत:मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही
अघिल्लोनारायणगढ–मुग्लिन सडक एकतर्फी सञ्चालनNext